Waxyaabaha ESRI, maxay yihiin? - Gofumed
Tani waa mid ka mid ah su'aalaha ay dad badani is weydiiyaan, ka dib marka shirarka ESRI la yimaado dhamaanba qiyaasta buugta aad u fiican, laakiin marar dhowr jeer waxay keenaan jahwareer sida aan ku haysto waxa aan doonayo inaan sameeyo. Ujeedada dib-u-eegidani waa in la keeno qalab waxyaalla waxyaabaha ESRI ay yihiin, shaqadooda iyo qiimaha go'aan qaadashada ay sameeyaan dadka isticmaala kuwa doonaya inay iyaga soo iibsadaan.
Qaybtaan waxaan ku arki doonaa wax soo saarka asaasiga ah ee dambe ka doodaan kordhin ugu badan, laakiin weli iibiya versions 3x ESRI (taas oo weli ku jira isticmaalka, waxaan diiradda saari doonaa qoraalkii ugu dambeeyey (9.2)
Ku saabsan ArcGIS
ArcGIS waa ururinta isku dhafan ee ESRI-yada loogu talagalay in lagu dhiso, la dayactiro oo lagu bilaabo nidaamka macluumaadka juqraafiyeed (GIS), oo ay ku jiraan macaamiisha masaafada, server, webka iyo moobilka. Waxaa la fahamsan yahay in shirkadaha ay iibsadaan dhowr ka mid ah badeecadahan iyada oo ku xiran waxa ay u baahan yihiin, alaabooyinka asaasiga ah ee ArcGIS waa kuwa soo socda:
Tani waa qalab loogu talagalay isticmaalka mashiinka, badanaa si loo dhiso xogta, wax ka beddelka, falanqeynta iyo soo saaro alaabta daabacada ama daabacaadda.
ArcGIS Desktop waxay u dhigantaa AutoCAD-ga shirkadda AutoDesk ama Microstation ee Bentley; Waxay faa'iido u tahay shaqooyinka guud ee GIS, haddii aad rabto in aad sameyso waxyaabo dheeraad ah oo gaar ah waxaa jira kordhin kale ama codsiyo, tan waxaa loo yaqaan qiyaasta oo ka bilaabma ArcReader, oo u fidiya ArcView, ArcEditor iyo ArcInfo. (Inkasta oo sida saaxiibkeenu uu sheegayo Xurxo, waa la haqabtiri karaa wax badan sababtoo ah codsiguna waa isku mid kala duwan yahay) Miisaaniyadan oo dhan waxay ku lug leedahay awood horumarineed oo dhammeystiraya kordhinta kale.
ArcGIS Engine waa maktabada qaybaha horumarinta macaamiisha kuwaas oo barnaamijyadeydu ay ku dhisi karaan qaybo waxqabadyo habaysan. Iyadoo la adeegsanaayo ArcGIS Engine, horumariyayaashu waxay kordhin karaan shaqadooda codsiyada hadda jira ama waxay dhisi karaan codsiyo cusub oo ay u hayaan ururadooda ama u iibiyaan kuwa kale.
ArcGIS Server, ArcIMS iyo ArcSDE waxaa loo isticmaalaa in lagu abuuro lagana shaqeeyo codsiyada ku saleysan server-ka, kuwaas oo wadaagaya howlaha GIS-da gudaha gudaha ama adeegga dadwaynaha adoo adeegsanaya internetka. ArcGIS Server waa codsi dhexe oo loo isticmaalo in lagu dhiso codsiyada GIS ee server-ka iyo in loo isticmaalo dadka isticmaala shirkad iyo shabakadaha internetka. ArcIMS Waa adeeg khariidad ah oo loogu talagalay daabacaadda macluumaadka, khariidadaha ama metadata webka iyada oo la adeegsanayo hababka Internet-ka ee caadiga ah. ArcSDE waa xog xogeed oo sareeya si loo helo nidaamyada maareynta macluumaadka juqraafiyeed ee xogta macluumaadka. (Ka hor inta aynaan samaynin a marka la barbardhigo kuwaan Adeegyada IMS)
ArcPad iyada oo ay weheliso qalab elektarooni ah oo loogu talagalay in lala tashado ama la ururiyo macluumaadka iyo macluumaadka gudaha, si habboon loogu dabaqo qalabka GPS ama PDAs. ArcGIS Desktop iyo ArcGIS Engine oo ku shaqeeya laptop ama kiniin ayaa loo isticmaalaa in lagu qabto hawlo u baahan in la ururiyo, falanqaynta iyo go'aan qaadashada xogta.
Dhamaan barnaamijyadani waxay isticmaalaan fikradda geodatabase, taas oo ah heerka ee xarumaha xogta juqraafi ah ee loo isticmaalo ArcGIS (qaabka aad u caadiga ah ee ESRI, iyada oo xaddidnta isbeddelada joogtada ah ee u dhexeeya qaybaha). Geodatabase waxaa loo isticmaalaa in lagu metelo walxaha dhul-beereedka dhabta ah ee ArcGIS kuna kaydi xogta. Geodatabase wuxuu qeexayaa astaamaha ganacsiga sida qalab lagu galo oo loo maamulo xogta macluumaadka juqraafiyeed.
ArcView waa nidaamka ESRI aasaasiga ah si loo arko, loo maamulo, loo abuuro loona falanqeeyo xogta juqraafi. Isticmaalka ArcView waxaad fahmi kartaa macnaha xogta juqraafiyeed, taas oo kuu oggolaanaysa inaad aragto cilaaqaadka u dhexeeya lakabyada iyo aqoonsiga qaababka dabeecadda. ArcView waxay ka caawisaa ururo badan si ay u gaaraan go'aano dhakhso leh.
ArcView waa nidaamka maareynta xogta macaamiisha ugu caansan caalamka (GIS) aduunka sababtoo ah waxay bixisaa hab sahlan oo lagu isticmaalo xogta. Iyada oo leh calaamado badan iyo awooda juquraafi ahaaneed waxaad si fudud u abuuri kartaa khariidado tayo sare leh. ArcView waxay ka dhigtaa maareynta xogta, wax qabadka asaasiga ah iyo hawlaha culus waxaa ka buuxsami kara dad kala duwan oo ku jira urur. Halka ku dhowaadba bixiyaha xogta juqraafiga ah ayaa ka dhigi kara macluumaadkaaga ku jira qaababka ArcView ee ku haboon. Iyo xaqiiqda ah in xogta lagu dhejin karo ilo kala duwan, mashaariicda waxaa loo bilaabi karaa habka ugu habboon ee xogta laga heli karo degaanka ama internetka. Qiimaha fasaxa ArcView wuxuu u socdaa $ 1,500 kombuyuutarka iyo $ 3,000 si shatiga leh. Waxaa sidoo kale jira qaar qiimaha gaarka ah degmooyinka.
ArcView waxay fududeyneysaa falanqaynta iyo hawlaha maareynta maareynta xogta, taas oo u oggolaanaysa hawlaha muuqaal ahaaneed inay noqdaan noocyo muuqaal ah oo ku dhex jira shaqo macquul ah. ArcView waa sahlan tahay in la isticmaalo dadka aan khaaska ahayn ee isticmaala, iyo dadka isticmaala horumarka ayaa awoodi doona in ay ka faa'iideystaan ​​qalabkooda gaarka ah ee loogu talagalay sawir qaadida, isdhaafsiga xogta iyo falanqeynta falanqaynta. Horumarinta waxay awood u yeelan karaan ArcView isticmaalka luuqadaha sida caadiga ah loo isticmaalo ee warshadaha barnaamijka. ArcView waa qalab fiican ee shaqada desktop, oo ka mid ah sifooyinka gaar ah ayaa lagu sheegi karaa:
Maaraynta xogta juqraafiyeed si loo helo go'aan wanaagsan
U fiirso oo falanqee xogta jimicsiga siyaabo cusub
Dhisida ururinta xogta juqraafi fudud oo dhakhso leh
Samee khariidado loogu talagalay daabacaadda tayada sare leh ama qaybinta
Maamul faylasha, xogta macluumaadka iyo macluumaadka internetka laga bilaabo hal codsi
Kala habeeyso interfyada iyadoo loo eegayo shaqooyinka loo adeegsado kuwa u baahan in la isku daro shaqada.
ArcEditor waa nidaam dhammaystiran ee codsiyada GIS si loo saxo oo loo xakameeyo xogta juqraafi. ArcEditor waa qayb ka mid ah xirmada ArcGIS waxaana ka mid ah dhammaan farsamooyinka ArcView iyo weliba waxaa ku jira qaar ka mid ah qalabyada lagu beddelo macluumaadka.
ArcEditor wuxuu leeyahay faa'iidada taageeraya labadaba mid ka mid ah isticmaaleyaasha ka shaqeynaya geedi socod wada shaqeyn. Qalab yaryar ayaa kordhiya awooddooda nadiifinta iyo xogta quudinta, iyo sidoo kale in lagu maareeyo topolojiyada adag iyo dayactirka xogta. Sicirka laysanka ArcEditor waa $ 7,000.
Qaar ka mid ah hawlaha la fulin karo ArcEditor waa:
Abuuri oo beddelo sifooyinka GIS ee "style CAD" qalabyada farsamooyinka vector
Dhisida xogta juqraafiga hodanka ku ah sifooyinka caqliga leh
Moodhalka isku dhafan, shaqooyinka badan ee shaqeeya
In la dhiso loona ilaaliyo daacadnimada shuruudaha oo ay ku jiraan xiriirka ka dhaxeeya sifooyinka u dhaxeeya sifooyinka juqraafi
Maamulida iyo sahaminta joomatariga qaabka nidaamyada shabakada
Kordhi waxsoosaarka ku jira qaabeynta
Maaree bey'ad qaabeysan oo badan oo isticmaala xogta leh isbeddel ku salaysan
Horumarinta sharafta qaaska ah ee udhexeeya lakabyada mawduucyada kala duwan iyo xoogga nidaamyada habeynta habdhaqanka habka ujeedka si ay u foojignaadaan habka dayactirka iyo cusbooneysiinta xogta.
Hawlgalka macluumaadka la xiray, dib u habeynta garoonka iyo marxaladda dambe.
ArcInfo waxaa loo tixgeliyaa nidaamka ugu dhammeystiran ee lagu maamulayo macluumaadka juqraafiyeed (GIS) oo laga heli karo khadka ESRI. Tani waxaa ka mid ah dhammaan howlaha ArcView iyo ArcEditor, marka lagu daro waxa kale oo ka mid ah qaybo hor leh oo geoprocessing iyo awoodda dib-u-rogidda xogta dheeraadka ah. Isticmaalayaasha GIS ee xirfadlayaasha ah waxay isticmaalaan ArcInfo si loo dhiso xogta, qaabaynta, falanqaynta iyo muujinta khariidadaha khariidadaha iyo sheyga daabacaadda iyo qaybinta. Qiimaha Lacagta ArcInfo waa $ 9,000.
ArcInfo, iyada oo adeegyadeeda ay ku jiraan baakad isku mid ah (sanduuqa dibadda) waxay awood u leeyihiin inay abuuraan oo maamulaan nidaam adag oo GIS ah. Farsamadani waa mid la heli karo iyada oo loo eegayo interface loo tixgelinayo "si sahlan loo isticmaalo", ama ugu yaraan taas oo lagu aqoonsan karo kala-duwanaansho weyn oo hoos u dhigtay badeecada wax-barashada ee muuqaalkeeda. Tilmaamyadani waa kuwo la gaari karo oo lagu badali karo moodooyinka, qoraalka iyo codsiyada gaarka ah.
Samee qaababka juqraafiyeed ee juqraafiyeed ee hay'adaha la xiriira, falanqaynta xogta iyo isdhexgalka macluumaadka.
Hirgelinta isku dhafka vektorka, isu dhowaanshaha iyo falanqaynta xaaladda.
Abuuri dhacdooyinka ku saleysan sifooyinka tooska ah iyo dhacdada oo isku dhafan leh sifooyinka lakabyo kala duwan.
U diyaari xogta iyo qaababka kala duwan.
Samee xog adag iyo falanqeyn, soocid, iyo hababka qorista si loo isticmaalo hababka GIS.
Khariidadaha sawirada ee sawirada adoo isticmaalaya meel ka baxsan sanduuqyada, naqshadeynta, daabacaadda iyo adeegsiga farsamooyinka maareynta xogta.
â € |cusbooneysiin... Noocyada ugu horreeya ee ArcInfo waxay ku saleysneyd daboolka xuduudaha xuduudaha, oo la mid ah caqligalka Microstation Geographics waana kuwaa loo yaqaanay daboolis (shey ayaa wadaagi kara sifooyinka kala duwan). Noocyada 9.2 hadda ma laha macquul ahaan, laakiin waxay ku habboontahay fikradda faylka qaabka.
â € |cusbooneysiin... In kasta oo ESRI ayaa qalabka ugu caansan suuqa, qiimaha u muuqdaan in ay noqon arrin yareysey for gaabsadeen badan oo :) indhaha ka go'da, laakiin qiimihiisu Xusidda badbaadinta xaqiiqada ah in shirkad weyn haysaa xasiloonida ee arrimuhu a farsamada (in kastoo aan xalka ugu fiican), shar ha ahaatee loo baahan yahay in ay hubisaa in hoos u qalooca barashada ... aunqeu waxaa jira fursado kale.
Mashruuca soo socda waxaan ku falanqeyn doonnaa kan ugu weyn kordhinta ArcGIS.
Si aad u iibsato waxyaabaha ESRI, waxaad la tashan kartaa GeoTechnologies ee Central America iyo Geo Systems ee Spain
Post Previous«Previous Sida codka loogu talagalay quruxda dabiiciga ah ee 7, January 2008
Post Next Kordhinta ArcGISNext »
15 Jawaabaha "ESRI-ga, maxay yihiin?"
Félix Mediavilla isagu wuxuu leeyahay:
Sida loo furo feylka Autocad LT ee ArcGis 9.2
Fred isagu wuxuu leeyahay:
Angel david, waa inaad la xiriirtaa ESRI oo weydiiso liisanka, hubi in aad qabto tirada wax soo saarka ee sanduuqa asalka iyo Sida xaqiiqada ah markaas u saxiixay ilaa email ah in ESRI diro, sidaas darteed waa in aad ka diiwaan magacaaga
Haddii liisankaagu yahay mid asal ah, markaad wax rakibayso, waxaa jira ikhtiyaar aad ku rakibto maamulaha liisanka, kaas oo rakibaya maktabadaha lagama maarmaanka ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan fahamsanahay in taageerada ESRI ay kaa caawin doonto tan.
malaa'ig isagu wuxuu leeyahay:
Marka ugu horeysa hambalyada pagima, su'aal ayaan qabaa, fiiri waxaan heystaa liisanka arcview 8.3, laakiin qaab maqalka. iyo nasiib darro waxaan lumay fayl adeegsanaya laysanka laysanka, mana garanayo sida loo soo cesho, waa ruqsad u sabayn ah mashiinnada 3 iyo horita maxaa yeelay ma haysto sida aan u shaqeeyo, waxaan haystaa dhammaan barnaamijyada diskiga ee barnaamijka, laakiin ma jiro wax soo socda, mahadsanid kahor
Waa hagaag haddii ay jiraan waxyaabo kale oo badan oo aad ku sameyn karto codsiyada kale.
Haddii aad tababarka dabooli kartid, ha seegin fursadda, laakiin hubso inaad qaadato koorso ah waxa aad noqon kartid alaab iyo waxaad heli kartaa liisanka.
Wixii aad qabatid, ArcMap ayaa laga yaabaa inay kugu filnaato, haddii waxa aad leedahay ay tahay shaqo miis. Abuur khariidado, daabacdo, tuseyso, cusbooneysiin.
Haddii aad horay u doonayso inaad maareyso xogta daabacaadda ee shabakada, tallaabadu waa in ay tagto ArcIMS, inkastoo arrintani ay ka baaraandegeyso kobcin kombuyuutar iyo lacago badan sababtoo ah liisamada waa qaali.
Ujeeddooyinka qabashada macluumaadka berrinka, jeebka ama PDA ka dibna u soo qaadashada PC, talaabadu waa inay tagto ArcPad.
Ujeedooyinka muujinta sawirada ee cabbirka 3, duulimaad duulimaad ah iyo waxyaabahan waalan ayaa talaabadaasi noqon doonta in ay tagaan ArcGlobe iyo 3D
Waxay ku xiran tahay oo aad rabto oo aad sameyn kartid ... laakiin haddii aad bixiso koorsooyinka ha ku lumin iyo haddii ay iibsan kartaa liisanka, waxa uu noqon lahaa rigoore Arc2Earth, taas oo aan aad u qaali ah oo aad u ogolaanaya in ay ku xidhmaan Google Earth
amelieast: mmm, Ma hubo su’aashaada, waxaan kugula talinayaa inaad su’aasha u dirto Forum Gabriel Ortiz , hubi inay kugu caawin doonaan si aad u wanaagsan.
dhaar isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsan tahay, hadii aan fahmi ... Arc GIS The rabay gudahood Reader Arc ah, Arc Scen, Globe Arc, Catalog Arc iyo ArcMap inay ka shaqeeyaan cuendo sidoo kale loo magacaabay Arc View.
Anigu waxaan isticmaalayaa software-ka, si kastaba ha ahaatee waxaan u maleynayaa in aan ku dhejin karo Map Mapka, maxaa kale oo aan ku ogaan karaa oo aan ka gaari karaa qalabka kale?
Hadda waxaan haystaa fursad aan ku codsado koorsooyin laakiin maxay tahay? Waxaan dalban karaa si aan u kordhiyo aqoontayda. Si aad u noqotid shaqo sax ah oo leh dhibco ka mid ah macadimihii waddankayga oo dhan iyo waxa aan ka heli karo juice barnaamijyadaas?
kun oo mahadsan
kumanaan isagu wuxuu leeyahay:
Sidoo kale maahan meesha ugu fiican ee aad ku weydiiso, sidaas darteed waxaan ku jiraa gacanta moderator meel wanaagsan.
In ArcGis, marka interpolas ka dibna aad isku dayaan in ay iska jar, oo aad wax badan ka mid ah xalinta lumin, ma qof ogaado sida aad samayn kartid si aad u dhawrtaan raadinaya ay ugu fiican?
Waxaad ku sameysaa mashiinka liisanka
Laga soo bilaabo desktop-kaaga:
guriga / barnaamijyada / ArcGIS / maareeyaha shatiga / qalabka maamulaha liisanka
ka dibna guddi shaqeynaya, waxaad aadeysaa "xaaladda server" ka dibna dooro "liis garee dhammaan liisanka firfircoon" oo guji batoonka "gudashada baaritaanka xaaladda"
waa inaad liis garaysaa liisamada la heli karo.
... haddii ArcGIS aan la dillaacin ...
Herland isagu wuxuu leeyahay:
qof ayaa ogyahay amarro sida loo ogaado tirada liisanka ee shatiga ruqsadda arcgis uu awood u yeeshay
Maxay yihiin? iyada oo qiimahaas lagu iibiyo haha
... wuxuu noqon doonaa heerka ESRI ... heerkiisa, heerkiisa gaarka ah, heerkiisa gaarka ah ...
gaaban, qofna heerkiisa.
salaan iyo mahadsanid dhiirigelinta, ayaa yimid waqtiyo aan doonayo in aan dhammaystiro boostada
kelo isagu wuxuu leeyahay:
Waa maxay kharashka ku baxaya qorista muddo dheer, oo ballaaran oo faahfaahsan oo ku saabsan qoyska ESRI !!!
Jid ahaan, ma aanan ogeyn in ArcPAD ay marinayso "jaangooyo" Geodatabases
Isagoo faraxsan, hadda kula qoyska Intergraph, qoyska MapInfo, ...!
Ma jiri doonaan nolol ka baxsan barnaamijka macaamiisha?
Waxaad ku saxsan tahay qiimaha, haddii ay si adag u garaacaan. Waad ku mahadsan tahay caddeynta arcinfo, laga yaabee in dad aad u tiro yar ay garteen sida ESRI uga lumisay fikradda asalka ah ee cabitaannada bilowgii shaqada.
markaan ka soo laabto dhabannada waxaan fiirin doonaa si aan u sameeyo caddayn.
Faallooyin dhowr ah:
«... Tani waxaa la yiraahdaa qiyaasta kala duwan ee laga bilaabo ArcReader, waxayna u fidisaa ArcView, ArcEditor iyo ArcInfo ...»
Man, taasi waa funny, miisaaniyadu waa in haddii aad bixiso aad u ogolaato inaad isticmaasho barnaamijka waxoogaa shaqeynaya ama ka yar? Farqiga u dhexeeya ArcGIS Desktop ee qaabka ArcView y ee qaabka ArcInfo marka la eego shaqeynta waa mid cajiib leh, lakiin halkii softwareku waa isku mid. Waxay u egtahay ka dib markaad bixiso baabuurka, waa inaad bixisid labo dalab si aad u isticmaasho qaboojiyaha in gaariga uu hore u lahaa ama uu isticmaali karo 5 socodka ....
Waa inaad taxaddar u yeelatid nidaamkan magacaabida, maxaa yeelay ArcInfo 9.2 ma aha jiilka hore iyo awoodda Arc / INFO Workstation kaas oo inta badan lagu isticmaalo qunfureed waxaana loo adeegsadey habka loo yaqaan 'Arc-Node Topology'. ArcInfo Tani waa waxa aan horay u sheegay, gaariga leh shanaad karti leh.
"Dhamaan barnaamijyadani waxay isticmaalaan fikradda geodka, taas oo ah heerka asaasiga macluumaadka juqraafiga ah ee loo isticmaalo ArcGIS."
¿Standard? format in uu xiran yahay, ma caddaymaha dadweynaha iyo isbeddel in la version kasta oo cusub. Waxaan geodatabase marnaba ka badan gadaal socon shakhsi, ganacsi, ku salaysan in files (EIN?) Oo: sida furan (ma leh edit, kaliya u furan !!!) geodatabase A 8.3 9 in ArcGIS reuse despídete in 8.3 ...
Marka la eego, haa, ESRI waxay leedahay qalabka ugu fiican ee suuqa oo aad awoodidid ... oon ahayn in la sheego siyaasadda qiimaha ESRI ee ka soo horjeeda kuwa ugu waawayn si wada jir ah, caddaynta aan u jeedo: waxaa jira halkii ay ka maqlaan CEO of ESRI Spain ee miiska wareegsan on IGN lagu daabacay Youtube dhawr todobaad ka hor, si cad xaqiijinayaa in ESRI waafajiyaan qiimaha ay macaamiisha ah iyo xaq u leeyahay kasta, qiimaha qurbaan dabcan in shirkadaha kuwaas oo ku nool qayb si ay u iibiyaan una qabtaan alaabooyinka ESRI ma bixin karaan, haynta dhaqashada suuqa. Uis sida aan ula socdo waxyaalahan ....